मंगलबारको पूजा विधि र व्रत कथा
१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार November 1, 2020 शुचि खबर	0 Comments
सबै किसिमका सुख प्राप्त गर्न, रक्तविकार शमन गर्न, शत्रुदमनका निम्ति, स्वास्थ्य रक्षार्थ तथा पुत्र प्राप्तिका लागि मङ्गलबारको व्रत एकदमै उत्तम मानिन्छ। यो व्रत शुक्ल पक्षको पहिलो मङ्गलबारबाट सुरु गर्नुपर्दछ । यो व्रत कमसेकम २१ वटा मङ्गलबारसम्म लिने प्रचलन छ। सकिन्छ भने जीवनभरि नै लिए अझ राम्रो मानिन्छ। यस व्रतमा गहुँ र सख्खरको भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, रातो कपडा लगाउनु पर्दछ । एक छाक अलिनो भोजन गर्नु पर्दछ । यस व्रतबाट मङ्गल ग्रहको अनिष्ट फल पनि शान्त हुन पुग्छ । बिहान उठेर स्नान गरी शुद्ध भएपछि रातो कपडा धारण गरी ‘ॐ भौमाय नमः’ ५ माला जप गर्नुपर्दछ । गणेश भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ ।
पूजा गर्दा रातो फूल, फल, तामा, नरिवल आदि दान गर्नु पर्दछ । ब्राह्मणलाई यथाशक्य तामा, मुसुरोको दाल आदि दान गर्नुपर्दछ वा आफूभन्दा कान्छो भाइलाई खुशी पार्ने वस्तु प्रदान गर्नुपर्दछ।
परापूर्वकालमा एक जोडी ब्राह्ममण दम्पती थिए । घरमा सबै वस्तु भए पनि एउटा सन्तान नहुनाले ती दुई पतिपत्नी दिनरात यही चिन्तामा घोरिई रहन्थे। ईश्वरसित आर्तपुकारा गर्थे- हे भगवन् ! कुनै उपायले हामीलाई एउटा पुत्र-रत्न प्रदान गर । यही उनीहरूको प्रार्थना थियो । पुत्र-प्राप्तिको इच्छाले ती ब्राह्मण कुनै वनमा आश्रम बनाई त्यसैमा बसेर नियम र निष्ठापूर्वक श्री हनुमानजीको आराधना गर्ने गर्दथे । उनकी ब्राह्मणी घरैमा बसेर आफ्नो मनोकामनाको र्पूर्तिका निम्ति हनुमानजीको पूजा आराधना गर्दथिन् । प्रत्येक मंगलबारका दिन श्री हनुमानजीलाई नैवेद्य अर्पण गरेर मात्र भोजन गर्दथिन् । दैवसंयोगले एउटा मंगलबार ती ब्राह्मणीले खानेकुरा पकाइनन्, त्यसै कारणले उनले हनुमानजीलाई खाने वस्तु अर्पण गर्न पाइनन् । उता उनले आँफूले पनि केही खान-पान गर्ने मौका पाइनन् साथै उनले अब अर्को मंगलबार आउँछ अनिमात्र भोजन गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञा पनि गरिन्। श्रीहनुमानजीलाई भोजन अर्पण नगरी म स्वयं भोजन गर्ने छैन भन्ने पनि उनको प्रतिज्ञा थियो । यही क्रममा छ दिनसम्म भोकै प्यासै रहेर उनको समय व्यतीत भयो। अनि मंगलबार बिहान हुनसाथ ती ब्राह्मणी अकस्मात् मूर्च्छा परेर ढलिन् । अनि श्री हनुमानजीले त्यही मूर्च्छाकै स्थितिमा दर्शन दिएर ती ब्राह्मणीलाई सचेतन अवस्थामा ल्याउनु भयो र आज्ञा गर्नुभयो- ‘तिम्रो पूजा सफल भयो । म तिमीलाई यो मङ्गल नामक सुन्दर बालक दिन्छु ।
← संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. फाउचीलाई बर्खास्त गर्दै ट्रम्प
आजको राशिफल २०७७ कार्तिक १८ (ई.सं.3November 2020) →
पुस १ गतेदेखि पशुपतिनाथ भक्तजनका लागि खुला हुने
१५ मंसिर २०७७, सोमबार December 3, 2020 शुचि खबर	0
२ कार्तिक २०७७, आईतवार October 21, 2020 शुचि खबर	0